अनुष्कादेखि ऐश्वर्यसम्म, यी अभिनेत्रीले कति महंगो मंगलसूत्र लगाएका थिए ? - www.kchhakhabar.com
अनुष्कादेखि ऐश्वर्यसम्म, यी अभिनेत्रीले कति महंगो मंगलसूत्र लगाएका थिए ?
प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ २८, २०७४ समय: १२:५६:०३
यसैपाली अनुष्का शर्माले क्रिकेटर विराट कोहलीसँग जोडी बाँधिन् । उनीसँग भारु ५२ लाख रुपैयाँको मंगलसूत्र छ ।
हुन त बलिउड अभिनेत्रीले मंगलसूत्र लगाएको उति देखिदैन । यद्यपी उनीहरुले मंगलसूत्र नै नरुचाउने भने होइन । गरगहनामा महिलाको त्यसैपनि रुची हुन्छ । गरगहनालाई शृंगारकै महत्वपू्र्ण हिस्सा मानिन्छ । अतः औपचारिक कार्यक्रमहरुमा यस्ता गरगहना लगाउनु पर्ने चलन पनि छ ।
मंगलसूत्र त अपरिहार्य पनि छ । खासगरी हिन्दु परम्परामा बिवाहित महिलाले मंगलसूत्र लगाउनुपर्छ । उनीहरुले जीवनभर मंगलसूत्रलाई जतनसाथ राख्नुपर्ने मान्यता पनि छ । बहुमूल्य धातुबाट बन्ने मंगलसूत्र राख्नैपर्ने कारणको पछाडि सायद आर्थिक सुरक्षा जोडिएको होला ।
यसको आयमिक पक्षलाई एकातिर छाडौं । किनभने यहाँ चर्चा गर्न लागिएको विषय हो, बलिउड अभिनेत्रीले कति महंगा मंगलसूत्र लगाएका थिए ?
यो प्रश्न किनपनि रोचक छ भने, बलिउड सेलिब्रेटीको कमाई करोडौं हुनेगर्छ । उनीहरुले एउटै फिल्मबाट करोडौं पारिश्रमिक लिने गर्छन् । त्यसबाहेक विज्ञापनलगायत स्रोतबाट पनि मनग्ये आर्जन गर्छन् । यस्तो अवस्थामा बलिउड अभिनेत्रीको मंगलसूत्रको मूल्यप्रति चासो हुनु स्वभाविक हो ।
ऐश्वर्य राय बच्चनले सिँउदोमा सिन्दुर र मंगलसूत्र लगाएको देखिदैन । औपचारिक कार्यक्रमहरुमा साडी र सामान्य गरगहना लगाउँछिन् । भनिहालौं, उनीसँग भारु ४५ लाख रुपैयाँको मंगलसूत्र छ । उनको मंगलसूत्र हिरा जडित छ । ऐश र अभिषेकको बिहे २० अपि्रल २००७ मा भएको थियो ।
अभिनेत्री शिल्पा सेट्टी अहिले योगाको कारण बढी चर्चामा छिन् । धेरैजसो समय उनी पश्चिमा शैलीको पहिरनमा ठाँटिएको देखिन्छ । औपचारिक कार्यक्रममा परम्परागत लुकमा पनि देखिन्छन् । शिल्पाले कहिलेपनि मंगलसूत्र लगाएकी छैनन् । यद्यपी उनीसँग हिरा जडित मंगलसूत्र छ, जसको मूल्य भारु ३० लाख रुपैयाँ हो । शिल्पाले व्यापारी राज कुन्द्रासँग २२ नोभेम्बर २००९ मा बिवाह गरेकी थिइन् ।
अभिनेत्री काजोलसँग भारु २१ लाख रुपैयाँको मंगलसूत्र छ । उनको मंगलसूत्रमा पनि हिरा लगाइएको छ । काजोलले २४ फेब्रुअरी १९९९ मा अजय देवगनसँग बिवाह गरेकी थिइन् ।
माधुरी दीक्षितसँग करिब भारु ९ लाख रुपैयाँको मंगलसूत्र छ । उनको मंगलसूत्रमा सून र कालो मोती जडित छ । त्यसमा रुद्राक्षको मोती पनि लगाइएको छ । यद्यपी उनी कमै मात्रामा मंगलसूत्र लगाउने गर्छिन् । माधुरीले अमेरिकाका डाक्टर श्रीराम नैनेसँग १७ अक्टुबर १९९९ मा बिवाह गरेकी थिइन् ।
करिष्मा कपुरको मंगलसूत्रको मूल्य भारु १७ लाख रुपैयाँ हो । करिष्माले २००३ सेप्टेम्बर २९ मा व्यापारी संजय कपुरसँग बिहे गरेकी थिइन् । अहिले उनीहरु दुबै अलग भइसकेका छन् ।